2011 တစ်နှစ်စာ ဂေဇက်သင်ခန်းစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » 2011 တစ်နှစ်စာ ဂေဇက်သင်ခန်းစာ
2011 တစ်နှစ်စာ ဂေဇက်သင်ခန်းစာ
Posted by weiwei on Dec 27, 2011 in My Dear Diary | 29 comments
ကျွန်မ ရွာလည်နေခဲ့တာ ၁၄ လ ရှိသွားပါပြီ။ အင်တာနက်မရတဲ့နေရာ ရောက်နေတဲ့အချိန်ကလွဲပြီး နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ရွာထဲဝင် ပို့စ်တွေဖတ်၊ သင်ခန်းစာတွေယူ၊ ကိုယ်သိတာလေးပြန်မျှရင်းနဲ့ ဂေဇက်နဲ့ပတ်သက်ရင် တော်တော်လေးနားလည် အကျွမ်းဝင်ပြီး အထာသိနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ဒီလောက်ကြာကြာ အချိန်ပေးပြီး ရေးနေ ဖတ်နေနိုင်တာကိုက ဂေဇက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အပြင်လောကမှာ မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် လိုင်းတစ်လိုင်းထဲမှာပဲ များတယ်။ ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေရှိမယ်။ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိမယ်။ ဆွေမျိုးရင်းခြာအနည်းငယ်ရှိတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် လိုင်းမစုံပါဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ကျွန်မမသိတာတွေ အများကြီး (အများကြီး) ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဗဟုသုတလဲ အများကြီးသိဖို့ လိုနေပါသေးတယ်။ လက်လှမ်းမမှီတဲ့ အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဗဟုသုတတိုးစရာ အံ့ဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီး သိစရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြလို့ ဂေဇက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ လူပေါင်းစုံက လိုင်းပေါင်းစုံ ၀င်ရေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အစပိုင်း ၀င်ဝင်ချင်းမှာ ကိုယ်သန်ရာကို ရွေးကြည့်ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ မိတ်ဆွေတိုးလာပြီး အားပေးတဲ့အနေနဲ့ဖတ်ကြည့်တယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့သိတာရှိရင် ၀င်ဆွေးနွေးတယ်။ ဆွေးနွေးတာ အားမရရင် ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေါင်းစုံ (ကဗျာပါမကျန်) ၀င်လေ့လာ၊ ခံစားရင်းနဲ့ တစ်နေ့တစ်ခြား အသိပညာတိုးလာပါတယ်။ ကျွန်မသဘောကျတဲ့ နောက်တစ်ချက်က ရွာသူားတွေရေးတဲ့ပို့စ်တွေဟာ ကီးအမြင့်ကြီးမတင်ထားကြပါဘူး။ ကီးနိမ့်တဲ့ ကျွန်မတို့လို စာဖတ်သူတွေအတွက် အနေတော်ပဲမို့ စိတ်ပေါ့ပါးပါတယ်။
အဲဒီလို အသိပညာတိုးလာတဲ့အပြင် လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေလဲ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ လူဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိကြောင်း တကယ်လက်တွေ့သိခဲ့ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးအခေါ်ဟာ သူနေထိုင်ကြီးပြင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်း၊ သင်ကြားတတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရပ်ပေါ်မှာလဲ မူတည်နေတဲ့အကြောင်း၊ ဘာသာတရားနဲ့လဲ ပက်သက်နေကြောင်း၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ လူတန်းစားနဲ့လဲ သက်ဆိုင်နေကြောင်း၊ မွေးရာပါစရိုက် (ဗီဇ) ကို ပြင်ရင် ခက်ခဲကြောင်း စသဖြင့် နားလည်လာခဲ့တယ်။ နားလည်လာတာနဲ့အမျှလည်း ခွင့်လွှတ်သီးခံမှုလဲ ပိုတိုးလာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ ရွာထဲဝင်ကာစ တစ်လကြာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ဒီရွာကိုကောင်းစေချင်စိတ် ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက် ဝေဖန်အကြံပြုစာလေးတစ်စောင်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူဟောင်းတွေ မှတ်မိကြအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီပို့စ်လေးကို ပြန်ပြချင်ပေမယ့် edit နဲ့ delete မှားသွားမိလို့ မရှိတော့တာကြာပါပြီ။ ကျွန်မကိုဝိုင်းပြီး ထောပနာပြုလိုက်ကြတာ တော်ရုံစိတ်မခိုင်တဲ့သူဆိုရင် ရွာထဲကတောင် ထွက်ပြေးသွားမိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ စိတ်မဆိုးခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မ စေတနာကို မသိလို့သာ ပြောကြတာလို့ မှတ်ယူပြီး အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို သင်ခန်းစာယူခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ စေတနာပေါ်လွင်စေတဲ့ ပို့စ်ပေါင်းများစွာရေးပြီး တော်ရုံ ပဋိပက္ခတွေမှာ ၀င်မပါဖြစ်တော့ပါဘူး။ သီးခံတာကောင်းကြောင်း ပို့စ်တစ်ခုတောင် ရေးတင်ခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။
ကျွန်မသတိထားမိတဲ့နောက်တစ်ချက်က ရွာသူားတွေ အရမ်းဥာဏ်ကောင်းကြပါတယ်။ အရိပ်ပြတာနဲ့ အကောင်ထင်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဥာဏ်အကောင်းလွန်ပြီး ကွန်မန့်ရေးသူက ရိုးရိုးရေးတာကိုတောင် ကွက်ကျော်တွေးမိပြီး ပြသနာတွေတက်ကြတာကိုလဲ ပရိတ်သတ်နေရာကနေ မကြာခဏ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အယ်ဒီတာက မတူသောအတွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာတွေကို သဘောကျတယ်။ မည်သူ့ကိုမဆို ၀င်ရေးနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ စာပေဒီမိုကရေစီ ပေးထားပါတယ်။ ၀ါသနာပါသူတွေက အစမ်းသဘောမျိုး ၀င်ရေးကြပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးက ၀င်အားပေးတယ်။ ကောင်းတာ ညံ့တာကို ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကနေ သိနိုင်ပါတယ်။ အားပေးမှုတွေကြောင့် အားတက်ပြီးဆက်ရေးကြရင်း ရွာအမာခံဖြစ်ကျန်ခဲ့သူတွေလဲရှိတယ်။ အားပေးတာနဲလို့ စိတ်ပျက်ပြီး လက်လျော့သွားသူတွေလဲရှိတယ်။ ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ရေးချင်လျက်နဲ့ မရေးနိုင်သူတွေလဲရှိတယ်။ စိတ်ဆိုးပြီး ရန်တွေ့ပြီးမှ ထွက်သွားသူတွေလဲရှိတယ်။ သိပ်ရေးချင်လွန်းလို့ နှစ်ကိုယ်ခွဲ၊ သုံးကိုယ်ခွဲတွေလဲရှိတယ်။ လက်သီးပုန်း (အနီကတ်) သမားတွေလဲရှိတယ်။
ပို့စ်တွေ၊ ကွန်မန့်တွေကြည့်တာနဲ့ စာရေးသူရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ခန့်မှန်းလို့ရလာပါတယ်။ ခန့်မှန်းနိုင်တာနဲ့အမျှ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ သူ့ကို နားလည်မှုပေးနိုင်လာတယ်။ လေးစားမှုပေးနိုင်လာတယ်။ သနားစိတ်ဝင်လာနိုင်တယ်။ အားကျစိတ်လဲဝင်လာနိုင်တယ်။ နားလည်ထားပြီးသားမို့ ရွံရှာမုန်းတီးစိတ်တော့ ၀င်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မရင်ထဲမှာ မိတ်ဆွေရင်းတွေ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အပြင်မှာတစ်ခါမှမသိ မမြင်ဖူး၊ ဂျီတော့မှာတောင် မသိဖူးပဲနဲ့ ရင်ထဲမှာ မိတ်ဆွေရင်းလို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရွာသူားတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မစာရေးရမှာ ပိုကြောက်လာပါတယ်။ မှတ်ကျောက်အတင်ခံနိုင်မှ၊ တာဝန်ယူနိုင်မှသာ ရေးချင်ပါတယ်။ သေချာစဉ်းစားပြီးမှသာ ရေးဖြစ် ကွန်မန့်ပေးဖြစ်သည်အထိ ဂရုစိုက်မိလို့ ပို့စ်တင်တာ ကွန်မန့်ပေးတာတွေတောင် နဲသွားပါတော့တယ်။ ဂေဇက်အပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာကတော့ ပိုပိုပြီးသာ လေးနက်လာတာမို့ ရွာထဲမှာမကောင်းသောနည်းနဲ့ ပွဲစည်နေတဲ့အချိန်တိုင်း အယ်ဒီတာသူကြီးကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားမိပါကြောင်းနှင့် ရွာသူားများဘက်ကလဲ မတူညီစွာတင်ပြလာတဲ့ အတွေးများ အရေးများကို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ နားလည်ပေးလိုက်ကြရင်ဖြင့် ဒီရွာကြီး အခုထက် ပိုစည်ကားလာမှာပါဟု ပြောကြားရင်း ကျွန်မ နားလည်မိသမျှ တစ်နှစ်စာ ဂေဇက်သင်ခန်းစာကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ ….
၁။ ၂၀၁၁ မှာ ဂေဇက်ရွာကြီး တော်တော်စည်ကားလာခဲ့ပါတယ်။
၂။ ၂၀၁၀ တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ကော်ပီပြသနာ မရှိသလောက်နဲသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမုန်းခံပြီး ပြောဆိုဝေဖန်ကြရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတာမို့လို့ အဲဒါကလဲ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရဲ့ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
၃။ ရွာသူရွာသားအချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု ပိုလာကြပါတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး ရေးသားလာကြတာ အားရစရာကောင်းပါတယ်။ သုတစာပေတွေမှာ ကီးမြင့်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ အတွေးအခေါ်တွေ တိုးတက်လာပြီး ရသပိုင်းမှာလဲ ဟာသဥာဏ်တွေ ပိုကောင်းလာကြတာမို့ စာဖတ်သူတွေကို စွဲဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေအထိ ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
၄။ ဓါတ်ပုံဆရာတွေများပြားလာတဲ့ အကျိုးအနေနဲ့ တကမ္ဘာလုံးကနေရာတွေကို တစ်နေရာထဲကနေ ထိုင်ကြည့်နေလို့ရနေပါပြီ။ ဓါတ်ပုံရိုက်နည်း ပညာရပ်တွေ ပိုကောင်းလာတာနဲ့အမျှ ကြည့်ရတာ မျက်စိအရသာရှိလာပါတယ်။
၅။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပိုရလာပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားလာကြလို့ သတင်းတွေက အရမ်း update ဖြစ်လာတာ အလွန်ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။
ခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင်း အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်နေတာမို့ 2012 မှာလဲ အခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ တိုးတက်ခြင်းတွေနဲ့ မန္တလေးဂေဇက် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း …..
ခရီးသွားစရာရှိလို့ ဒီပို့စ်နဲ့ 2011 ကို နှုတ်ဆက်ရင်း 2012 မှာမှ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့ …..
Haveanice trip weiwei!!!
Thanks for your post. I really enjoy it.
အများအတွက် အကျိုးပြုပေးနေတဲ့ ဒီရွာကြီး(မန္တလေးဂေဇက်) ကို ဂုဏ်ပြုပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် တကယ်ရလာပြီဆိုရင်တော့ ပိုမိုပြီး တိုးတက်ကောင်းလာမယ် ထင်ပါတယ်။ ယခုတော့ ကျွန်တော်တို့လို လူမျိုးတွေမှာ ကလောင်ဝှက်နဲ့ သာ (ပုဆိုးခြုံထဲမှ လက်သီးပြနေကြရပါသေးတယ်ကွယ်..။)
နောက်ထူးခြားချက်ကတော့ ရွာထဲမှာ ကြောင်ဦးရေ တိုးပွားလာခြင်းပါ။ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ ကြောင်အပေါင်းတို့….။
ရွာထဲ ၀င်ပြီး မကြာမတင်မှာတင် မဝေ နဲ့ ခင်မင် ရင်းနှီးပြီး အပြန်အလှန် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်း ပြောဆို ကြရင်းနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ရွာသက် ရင့်လာတာနဲ့ အမျှ ရွာအထာလည်း တော်တော် သိနေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ အလယ်လောက်အထိတော့ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ ရှေ့ဆုံးက ၀င်တိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၁၁ အကုန်ပိုင်းမှာတော့ တိုက်ပွဲတွေမှာ သိပ်မပါဖြစ်အောင် နေခဲ့တယ်။
၁သိန်း ရပြီးနောက်မှာ စာမရေးတော့ဘူး စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ မနေနိုင်လို့ သံယောဇဉ် မပြတ်နိုင်တာကြောင့် စာရေး စာဖတ် ဆက်လက် လုပ်နေဆဲပါ။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ အတွက်တော့ ရွာသူား အပေါင်း ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ်။
ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးတွေလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
နှစ်ဟောင်းမှ နှစ်သစ်တိုင် အတူလက်တွဲလာတဲ့ ဆူးဝေေ၀ တို့လည်း ဆက်လက်ရပ်တည်အောင်မြင်ပါစေလို့ ထပ်မံ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်တယ်နော်……
ကျွန်တော်လဲ အပေါ်ကလူတွေလို ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…
ဖိုးသူတော် ရွာလည် ရင် ဆန်ပို ရသတဲ့
ကျုပ် တို့ တွေ ရွာလည်တော့ ၊ ပညာ သတင်း နည်းပညာ ဗဟုသုတ တွေ
အများကြီး ရတာပေါ့ ဗျာ
အဲ ပြောလို့မရရင်တော့ ရိုက်ထဲ့လိုက်တာဘဲ။
ကျနော် မှန်းဆကြည့်တာတော့ ၂၀၁၂ ထဲမှာ လူသစ်တွေပိုဝင်လာပြီး၊ လိုင်းစုံပိုရေးလာလိမ့်မယ်။
ဂေဇက်အဆင့်ပိုမြင့်လာမယ်ပေါ့ဗျာ။ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေရဲ့ နောက်မှာဂေဇက်လည်း ပိုပြီး
ကျနော် မူရင်းစိတ်ကတော့ ဖတ်တာပိုအားသန်ပါတယ်။
၀ယ်နိုင်ခဲ့ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဗျို့ ။
တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတင်းရပ်ကွက်ကနေ ကြားရတဲ့ အသံအရ ဆိုရင်
ကျုပ်တို့ ရွာသားတွေ ထဲ က ဆီ
တစ်ပုံ ကို ဒေါ်လာ ငါးရာ နဲ့ 
သဂျီးက ကတ်ရှ် ပေးဝယ်နေတယ် ဆိုဘဲ
မဝေရဲ့ ဂေဇက်အနှစ်ချုပ်လေးက ကျေးဇူးတင်စရာအပြင် လွမ်းစရာလေးပါပေးပါတယ် …။
ကျနော်ဂေဇက်ကို DVB ကနေတဆင့်သိရတာပါ။ အဲဒီက ဂေဇက်အကြောင်းပြောတော့
တခါဖွင့်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကမှတ်မိပါသေးတယ် ဂေဇက်တမျက်နှာဟာ တပတ်နီးပါးလောက်
ကြာပြီးမှပြောင်းတယ်ထင်တာပါဘဲ ..။ ရေးသူနဲသေးတာပေါ့ …။ ကျနော်စိတ်ဝင်စားလို့စပြီးရေးကြည့်တော့ မြန်မာလိုမရိုက်တတ်ပါဘူး အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်တော့လဲ
သိပ်ဖတ်သူမရှိဘူး ….. ဒါနဲ့စာရွက်ပေါ်လက်ရေးနဲ့ရေးပြီး scan ဖတ် ပြီးတင်ရပါတယ် …။
ခပ်ကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပါ …။ နောက်တော့သူများတွေကိုအားကြပြီး မဖြစ်မနေကျင့်လိုက်တာ
အခုဆို အတော်လေးရိုက်နိုင်ပါပြီ …။ အပြင်မှာဒီအတိုင်းကျင့်မယ်ဆိုရင် ဒီလောက်မမြန်နိုင်ပါဘူး ..။
ဂေဇက်ရဲ့ကျေးဇူး … သူကြီးရဲ့ကျေးဖူးပါဘဲ ..။ဘာဘဲပြောပြောတနှစ်ဆိုတဲ့သက်တမ်းတိုးလာပြန်ပါပြီ
ဂေဇက်ဟာလဲ ပြည့်စုံသင့်သလောက် ပြည့်စုံလာပြီမို့ဝမ်းသာစရာပါ။
ရှေ့နှစ်တွေမှာ တမျိုးတဖုံမရိုးရအောင် ဘယ်လိုအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ဘယ်သူတွေက မတူတဲ့အတွေးတွေ
ကိုတင်ပြကြမလဲဆိုတာ စောင့်စားရင်းနဲ့ …. သူကြီးဘက်ကလည်း ဂေဇက်ကို ဘာတွေများ
သည့်ထက်သည့်ထက်ပိုကောင်းအောင် တည်ထွင်ကြံဆပေးအုံးမလဲဆိုတာ ရင်ခုံစွာစောင့်စားရင်း
နှစ်သစ်ကိုကျော်ဖြတ်ပါ့မယ် …လို့ ။
ကျွန်မ ရွာထဲစရောက်တာက ၂၀၁၀မှာ စာတွေပဲလိုက်ဖတ်တယ်။ ၂၀၁၁ အစမှာမှ မန်ဘာဝင်ဖြစ်တယ်။ ကွန်မန့်လေးတွေပဲလိုက်ရေးတယ်။ နောက်တော့ စာရေးချင်တဲ့ ရောဂါအခံကရှိတော့ေ၇းချင်စိတ်တွေ တားမရတာနဲ့ ပို့စ်လေးတွေ တင်ဖြစ်ရင်း စာတွေလိုက်ဖတ်၇င်း သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်ပြီး ရွာထဲ မ၀င်ရ မနေနိုင်အောင်ပဲ။ တယောက်နဲ့ တယောက် မမြင်ဖူးပါပဲနဲ့ အရင်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့သလိုပဲ ခံစားလာရပါတယ်။ ပြီးတော့ လူနဲ့ နာမည်နဲ့ တွဲပြီးလည်း မြင်ချင်လာပြန်ရော အတွေးထဲက ပုံနဲ့ အပြင်ကပုံ တူနိုင်လားပေါ့။ ရွာက ဖမ်းစားထားတာများ ရုန်းထွက်လို့ မ၇အောင်ပါပဲ။ လာမည့် ၂၀၁၂မှာ ရွာထဲကို လာနိုင်မှာ မဟုတ်တော့လို့ စိတ်တော့ မကောင်းဘူး။
နှစ်သစ်မှာ ရွာကြီးလည်း ဒီထက့်စည်ပင် သာယာပါစေ။ ရွာသူားတွေလည်း စာတွေ ဆထက်တပိုးတိုး ရေးနိုင်ပါစေ။ ဓါတ်ပုံတွေလည်း တင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
ရှေ့နှစ်ဆိုရင်တော့ …. စာတွေပိုဖတ်ဖြစ်တော့မယ်…ထင်ပါရဲ့ဗျာ…..
ဂေဇက်က.. ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်.. သုံးခါပြောင်းထားတာပါ..။
လူတွေထောင်ဂဏန်းဖြစ်လာလိုက်.. ဟက်ကာက ၀င်သမသွားလိုက်နဲ့ပေါ့..။
အမှတ်မမှားရင်..အခုရွာသူားတွေအထဲက.. ကြေးမုံက.. ဟိုးအရင်.. ဖိုရမ်xoops နဲ့လုပ်ကတည်းက..ရေးနေတာပါပဲ..။
အယ်လ်အေက အဇူဇာဘုန်းကြီးကျောင်း ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းမှာရေးခဲ့တဲ့သူတွေ တော်တော်များခဲ့တယ် မှတ်မိပါတယ်..။
မန္တလေးဂေဇက် သက်တန်းက ၂၀၀၆ကစပါတယ်..။ ဒါမတိုင်ခင်..တခြားဒိုမိန်းအမည်နဲ့.. ဖိုရမ်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ပုဂံ၊ပုလဲနက်နဲ့.. ဘလော့ဂ်တွေမပေါ်လာခင်ကတည်းကပါ…။
မင်ဘာလည်း.. ၂သောင်းလောက်အထိ ရှိဖူးပါတယ်.။
… ရွာသူားတွေကို.. ရွာသူားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်တဲ့.. သက်တန်းအရင့်အနု(၀ါ) နဲ့..မသတ်မှတ်စေလိုပါဘူး..။
၀ါအစား..သဘာ..ပညာ..အရေးအသားတွေနဲ့ သတ်မှတ် ဖြတ်ကြစေချင်တာပါ..။
ဖြစ်ချင်တာရယ်..ကြိုးစားရယ်မှာရယ်ကတော့.. ပွိုင့်တွေကို.. ငွေအဖြစ်ပြောင်း.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတခု..ဒါမှမဟုတ်.. ပေးငွေတခု ဖြစ်သွားဖို့ပါပဲ..။
မြန်မာပြည်ဘတ်စ်ကား ထိခိုက်မှုအာမခံငွေရဲ့ ပရိမီယံကြေးကို.. ပွိုင့်နဲ့ပေးနိုင်ဖို့ပါ…။
အဲဒါမျိုးကို..သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး.. အသက်သွင်းကြည့်မယ်စဉ်းစားထားပါတယ်နော..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. ၂၀၁၂ က..ကမ္ဘာမပျက်ခဲ့ရင်.. ဒီရွာကြီးဟာ.. မြို့အဖြစ်အဆင့်မြှင့်လိုက်တာ မြင်နိုင်ကြမယ်ထင်မိပါတယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ၂၀၁၂မှာလည်း. မန္တလေးဂေဇက်က.. ရှိပြီးနဲ့..လာလတံ့သော ရွာသူားများ စွမ်းအားတွေပေါင်းစုပြီး မြန်မာပြည်အတွက်..ဆက်လက် ပေးဆပ်သွားပါဦးမယ်လို့..။
၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်ခါနီးရင် ဖာရာရီက DOOMSDAY PROMOTION အနေနဲ့
၉၉% ဒစ်စကောင့်ပေးတယ်တဲ့ခည ….၀ယ်စီးကြရအောင်….
ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says:
သဂျီးမင်း ခင်ဗျား/ရှင့် ကျေးဇူးပြု၍ သောတဆင်ပါ
ရွာသူ ရွာသား ပြီးနောက် လိင်တူ ချစ်သူ များလို့
……………………………. ဦးဘဇင်း ဘဒ္ဒ န္တ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
၂၀၁၁ မှ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်
သူကြီးနှင့် ရွာသူရွာသား အပေါင်း နှစ်သစ်မှာ စီးပွားဥစ္စ တိုးတက်ကြပါစေ။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့
လွန်ခဲ့တဲ့ သကြန် ၀န်းကျင်မှာမှ မင်ဘာဝင်ဖြစ်ခဲ့တာထင်တာပဲ။
တခါတလေ တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်း ၀င်ပြောပေါ့လေ။
ကိုယ့်ကိုလဲ ဘယ်သူမှ သတိထားမိတယ် မထင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူများရေးတာတွေဖတ်ပြီး ရွာသူရွာသားတွေကို စိတ်ထဲမှာ ခင်လာတယ်။ ရင်းနှီးလာသလိုတောင်ရှိတယ်။
တခြားဆိုက်တွေမှာဝင်ရေးရင် အားလုံးတစိမ်းချည်းပဲ။ ဒီရွာလေးကတော့ ထူးထူးခြားခြား ဆွဲဆောင်မှု့ရှိလှပါတယ်။
ရှေ့နှစ်မှာတော့ သူကြီးကြိုကြွားထားသလို မြို့လေးဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
အော် ..ခွဲခွါ အုံးမယ်ဆိုပါတော့ ………………..
ဂေးဇတ်ရထားကြီးလဲ အောင်မြင်စွာ ဆက်လက် ထွက်ခွါနေအုံးမယ် ထင်မိပါတယ်….
မဝေရေ ကျမလည်း ရွာရောက်တာ ၅ လကျော် ၆ လနီးပါးလောက်ပဲ ရှိအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီရွာရောက်မှ ရလာတဲ့ အသိအမြင်တွေထဲက မြင်သာတာလေး ပြောပြရရင်
အကြောင်းအရာ တခုကို ထောင့်ပေါင်းစုံက တွေးကြပြောကြတဲ့အတွက် မတူတဲ့ အမြင်တွေအသိတွေက နေ ဗဟုသုတတွေ တိုးခဲ့ရပါတယ်….
လူတွေ အကြောင်းကို ပိုသိလာသလို လူပေါင်းစုံ ရောထွေးနေတဲ့ရွာကြီး မှာလည်း လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်လာပါတယ်…..
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း လူသားပိုဆန်လာတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်….
ကျနော်အပါအ၀င် ဂေဇက်ထဲမှာ ဗေဒင်က၀ိတချို့ရှိနေတယ်ဆိုတာ
သတိထားမိတာကြာနေပြီဗျ… ဒီလူတွေ ၂၀၁၁မှာစာပဲ လှိမ့်ဖတ်နေကြတယ်
ခြေယောင်.. အဲ.. လက်ယောင်သိပ်မပြကြဘူး.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ထို ဆရာများလည်း အတွေ့အကြုံ၊ ဗေဒင်ပညာတွေ မပျောက်ပျက်သွားအောင်
ဖတ်သူအဆင့်နဲ့ ရပ်မနေပဲ ကိုယ်တိုင် ၀င်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျာ..
ကျနော်တော့ ၂၀၁၂ထဲမှာ သိပ်ရေးနိုင်တော့မယ်မထင်လှဘူး…
ကျန်ရစ်သူ ရွာသူားများနှင့်တကွ စာမရေးဖြစ်သေးသော မီးခဲပြာဖုံး
ဗေဒင်က၀ိများလည်း ဂေဇက်စင်မြင့်ထက်ကနေ ၂၀၁၂ အတွက်
၀ိုင်းဝန်းပြီး အဆင်မြင့်တဲ့ ရွာတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်အောင်
ကြိုးပမ်းကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ညာ… :cool:
ဦးဖက်တီးကို စောင်းပြောတာလား…ဆြာဖက်တီးရေ…လက်စွမ်းပြလေး တပုဒ်လောက်ဗျို့…..။ (အခုထိတော့ ပိုက်ဆံဝင်မလာသေးဘူး၊ မျှော်ရလွန်းလို့ လည်ပင်းလည်းရှည်လှပြီ)
ကျနော်တို့ရဲ့ ဂေဇက်ကို ၂၀၁၁မှာ အထူးခြားဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်…မန်းဂေဇက်က ပိုမိုပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်စွာနဲ့မြင်တွေ့နေရပါပီ…ရှေ့ဆက်ပြီး ဂေဇက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ရွာသူားများအားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါဆို့…
စာရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်း ကိုဖက်တီး ပြောသလိုမြန်မာစာတွေဘာတွေရိုက်တတ်လာပါတယ်..
သေးတာဂလား။ အခုတော့ဂေဇက်မှာမန့်ချင် ရေးချင်ဇောနဲ့…အတော်တောင်ရိုက်တတ်လာပီ…ဂေဇက်
ဒီပို့စ်တင်ပြီးကထဲက ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တာနဲ့ ခရီးသွားဖြစ်လိုက်တာနဲ့ ကွန်မန့်တွေကို reply လုပ်ဖို့ ပျက်ကွက်နေခဲ့တာ ဒီနေ့မှ သတိထားမိပါတယ် …
ကွန်မန့်ပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …